पार्टी प्रवेश गराउने होडबाजी गर्दै दलहरू — Samyantra.com
गृहपृष्ठ » न्युज, मुख्य खबर → पार्टी प्रवेश गराउने होडबाजी गर्दै दलहरू
पार्टी प्रवेश गराउने होडबाजी गर्दै दलहरू
October 6, 2017४४३ पटक
नवलपरासी । रुपन्देही जिल्लाका टप व्यापारी एवंम् समाजसेवी प्रमोद यादव एकाएक नेपाली काँग्रेसमा प्रबेश गरेपछि यसले राष्ट्रिय राजनितिमा चर्चा पाएको छ । यादवलाई प्रबेश गराउन प्रधानमन्त्री एवंम् पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा सहित पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल महामन्त्री डा. शशाकं कोईराला लगायतका दर्जन बढी नेता एकैपटक सोमबार रुपन्देही आएपछि यसले राष्ट्रिय राजनितिमा चर्चा पाएको हो ।
रुपन्देहीका युवा व्यवसायी प्रमोद यादव राजनितिक मार्फत जनताको सेवा गर्न नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवंम् प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाले एक भब्य समारोह बिच व्यापारी एवंम् समाजसेवी यादवलाई नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गराउनुभएको हो ।
विभिन्न पार्टीले आ आफ्नो पार्टीमा प्रबेश गर्न आग्रह गरिरहेको बेला युवा व्यवसायी यादव एक्कासी नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् । मधेशी सहित आम बर्गको माग नेपाली काँग्रेसले मात्र पुरा गर्न सक्ने भएकाले आफु यो मुलकको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेको पत्रकारहरु संग प्रतिकृया दिनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसको राजनितिमा आन्तरिक रुपमा मात्र सक्रिय यादव अब राष्ट्रिय राजनितिमा आउने पक्का छ । यादव आसन्न प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा रुपन्देही जिल्लाबाटै निर्वाचन लडने पक्का पक्की छ ।
यस अगाबै नेपाली काँग्रेसको शुभचिन्तक र शुभेच्छुक को रुपमा मात्र रहनुभएका यादव एक्कासी राजनितिक यात्रामा होमीनुभएको हो । यादवलाई पार्टी प्रबेश गराउन प्रधानमन्त्री एवंम् पार्टी सभापति देउवा सहित पार्टीका बरिष्ठका नेता रामचन्द्र पौडेल महामन्त्री डा. शशाकं कोईराला , नेपाली काँग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल , दिपक गिरी , देवेन्द्रराज कण्डेल लगायतका एक दर्जन बढी केन्द्रिय तहका शिर्ष नेताहरु एक भव्य समारोबिच रुपन्देहीको बनगाई पुगेका थिए ।
करिब दश हजारको जनसहभागीतामा लोकप्रिय समाजसेबी यादव नेपाली काँग्रेसमा प्रवेशमा प्रबेश गर्नुभएको हो । सो क्रममा सभापति एवंम् प्रधानमन्त्री देउवाले आगन्तुक नेता यादवलाई तत्काल पार्टीले थप जिम्मेवारी दिने उद्घोष गर्नुभएको थियो ।
हजारौ जनसहभागीतामा पार्टी प्रबेश गर्नुभएका समाजसेबी यादवले सो अवसरमा बोल्दै यो मुलुकको हित र नेपालीको हित नेपाली काँग्रेसले मात्र गर्न सक्ने भएकाले सबैलाई नेपाली काँग्रेसलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
समाजसेबी यादव हाल भैरहवामा रहेको एक मात्र शुुविधा सम्पन्न एक मात्र रिसोर्ट रेडसट रिसोटका मालीक , बिपी टेड्र्रसका मालीक र रियल स्टेड लगायतका कारोबारमा आबद्ध हुनुहन्छ ।